Masia Blanca - I-Airbnb
Costur, Comunidad Valenciana, i-Spain
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Pauline
♡ Siyakwamukela ku-Masia Blanca!
Maphakathi namagquma aseCastellon, uhambo lwemizuzu engama-30 ukusuka oLwandle iMedithera, kuyindlela encane yangasese eholela endaweni yethu engu-30,000 m2 egcwele izihlahla ze-alimondi neminqumo. Le ndawo kanye namadolobhana amaningi eNkathi Ephakathi ayizungezile kungenziwa iphutha njengeTuscany, iTuscany yaseSpain.
Ungahamba ngezinyawo, ukugibela izithuthuthu, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, vakashela amadolobha, uye ogwini lolwandle noma uphumule ngesiphuzo ku-terrace yakho.
Sibheke ngabomvu ukukwamukela ku-Masia yethu!
Kuhle ukwazi ngoMasia Blanca
I-Masia Blanca iyikhaya lamaholide elizimele elinamakamelo okulala angu-2, igumbi lokugezela elingu-1, igumbi lokuphumula, ikhishi kanye nethala elizimele elinemibono emihle yezintaba nolwandle. Awudingi ukwabelana ngendawo nezinye izihambeli.
Ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi ngangokunokwenzeka, sinikeze indlu ngezinto eziningi ezengeziwe ezinjengalezi:
♡ Ikhofi / itiye / amanzi mahhala
♡ Ikhishi elinama-burners amabili
♡ I-WIFI yamahhala
♡ Ukupaka endaweni
♡ Ithala langasese
♡ I-BBQ yakho
Ingabe uyeza ukuzojabulela i-Masia Blanca?
IMasia Blanca iphakathi nendawo eduze nePenyagolosa endaweni ebizwa nangokuthi iTuscany yaseSpain phakathi kweValencia neCastellon.
Izungezwe imvelo enezitshalo nezilwane ezicebile kakhulu futhi ezihlukahlukene. Indawo ilungele imvelo kanye / noma abathanda imidlalo abakhuthele banoma yiluphi uhlobo.
♡ Indawo yemvelo: izintaba
♡ Itholakala phakathi kwemizila yokuhamba izintaba neye-MTB
♡ Izigodi zendabuko zaseSpain (Ama-Villafames & Abasebenzisi 15min)
♡ Idolobha lasogwini namabhishi (iBenicassim neCastellon 30min)
♡ izikhumulo zezindiza eziseduze: Valencia (1 ihora)
Awuzizwa njengomdlalo wezemidlalo kodwa ufuna ukuphumula futhi ujabulele ukuthula nobumfihlo ke le ndawo nayo ifaneleka kakhulu.
Siphinde siphile esizeni futhi sihlale siseduze ukuze siphendule imibuzo futhi siyajabula ukukutshela kabanzi mayelana nendawo nezinto ezijabulisayo ongazenza lapha. Indlu yethu icishe ibe ngamamitha ayi-100 ukusuka ekhaya lamaholide ngakho kukhona ubumfihlo obuningi.
Siphinde siphile esizeni futhi sihlale siseduze ukuze siphendule imibuzo futhi siyajabula ukukutshela kabanzi mayelana nendawo nezinto ezijabulisayo ongazenza lapha. Indlu yethu ic…
Hlola ezinye izinketho ezise- Costur namaphethelo